निर्माणको गुणस्तरमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ | गृहपृष्ठ
Home विकास निर्माणको गुणस्तरमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ
सन्तोष शाह, निर्देशक, आश्रय निर्माण सेवा प्रालि
रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाको वर्डअवामा जन्मिएका सन्तोष शाह निर्माण व्यवसायी हुन् । २०४१ माघ १७ गते दर्ता भएको आश्रय निर्माण सेवा प्रालिका निर्देशकसमेत रहेका शाह करीब १० वर्षदेखि निर्माण सेवामा सक्रिय छन् । निर्माण व्यवसाय मात्र नभई उनले समाज सेवासमेत गर्दै आएका छन् । निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएकै कारण विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित उक्त कम्पनीका निर्देशक शाहसँग आर्थिक अभियानका रौतहट संवाददाता दीपेश पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
आश्रय निर्माण सेवा प्रालिको अवस्था कस्तो छ ?
विभिन्न संरचना निर्माणमा कम्पनी व्यस्त छ । विगत वर्षझैं यस वर्ष पनि पुल, सडक, भवन लगायत संरचना निर्माण भइरहेका छन् । निर्माणाधीन संरचनालाई गुणस्तरीय बनाउने र समयमै हस्तान्तरण गर्ने योजना आश्रय निर्माण सेवा प्रालिले लिएको छ । अहिले कतिपय संरचनाको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । तर निर्माण कार्य भइरहे पनि समयमा भुक्तानी पाउने अवस्था भने छैन । यसले निर्माण व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ । कम्पनी गुणस्तरीय संरचना निर्माणमा प्रथामिकता दिँदै आए पनि भुक्तानी पाउन विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । त्यसैले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समग्रमा भन्दा आश्रय निर्माण सेवा प्रालिको अवस्था राम्रो छ ।
निर्माण व्यवसाय मर्यादित बनाउन सम्बन्धित कम्पनीको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
निर्माण व्यवसायी आलोचित हुनुमा आफैमा रहेको कमी कमजोरी मुख्य कारण देखिन्छ । निर्माणको जिम्मा पाएपछि समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीले लिनुपर्छ । निर्माण कम्पनीले एकैपटक धरैओटा निर्माणको जिम्मा लिने प्रवृत्ति छ । तर काममा भने सीमित स्रोत र साधनको परिचालन हुन्छ । यसकारण समयमै निर्माण तथा हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन । यसले पनि निर्माण व्यवसायी आलोचित हुनुपरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारको निति पनि हो । टेन्डर आह्वान प्रक्रियामा निर्माण कम्पनीले कम रकममा साकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । लागतभन्दा कम रकममा काम गर्दा समेत भुक्तानी समस्या, स्थानीय स्रोतसाधनको अभाव जस्ता कारण निर्माण समयमै नसकिने र निर्मित संरचनामा पनि समस्या आउने गर्छ । त्यसैले टेन्डर आह्वान प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारी स्तरबाट समेत सहयोगको आवश्यक्ता पर्छ ।
निर्माण क्षेत्रमा कस्ता किसिमका समस्या छन् र यसलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ?
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मुख्य समस्या भनेकोे सरकारको दोहोरो नीति नै हो । सरकार संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्छ । तर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न दिँदैन, जसकारण निर्माणको काम प्रभावित हुन्छ । सरकारले नै निर्माणको जिम्मा पनि दिने र उक्त कार्यमा बाधा पनि पु¥याउने नीतिका कारण निर्माण व्यवसायी मारमा छन् । सरकारले ढुगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि बोलपत्रमै स्थान र मापदण्ड तोकिदिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रमा मुआब्जा, जग्गा विवाद जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच सहकार्यको खाँचो छ ।
कम्पनीका आगामी योजना के के छन् ?
कम्पनीको मुख्य योजना र लक्ष्य भनेको गुणस्तरीय संरचना निर्माण गरी समयमै हस्तान्तरण गर्नु हो । कम्पनीले जिम्मा लिएको ६ ओटा पुल निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये तीनओटाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । असार मसान्तसम्ममा पुल निर्माणका काम सक्ने योजनामा कम्पनी रहेको छ । यस्तै हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सर्लाहीको गौरदेखि मलंगवासम्मको सडक निर्माण भइरहेको छन् । यो काम जेठभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । गौर स्मार्टसिटीको योजनामा हालसम्म सडकको काम ५० प्रतिशत पूरा भएको छ भने अन्य काम पनि भइरहेका छन् । निर्मित संरचना समयमै सम्पन्न गर्ने योजना र लक्ष्यका साथ कम्पनी अघि बढेको छ ।
तपाईं निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ । गुणस्तरीय निर्माणमा योगदान पुर्‍याउन महासंघको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
समग्र निर्माण व्यवसायीको प्रतिनिधित्व महासंघले गर्छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको समस्याका बारेमा समय समयमा संघले आवाज उठाउने गरेको छ । त्यसका अलावा निर्माण व्यवसायीलाई एकीकृत गरी उनीहरूको समस्या बुझ्ने र निराकरण गर्नेतर्फ संघले पहल गर्दै आएको छ । निर्माण क्षेत्रको ऐन संशोधनका लागि काम भइरहेको छ । गुणस्तरीय संरचना निर्माणका लागि सरकारले नै तोकिदिएको मापदण्ड अनुसारको सामग्री निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उत्पादित निर्माण सामग्री गुणस्तरीय भए/नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तोकिएको मापदण्ड अनुसारकै सामग्री प्रयोग गर्दा समेत संरचना गुणस्तरीय नहुनुमा सरकारी पक्ष पनि दोषी देखिन्छ । सिमेन्ट, छड लगायत निर्माण सामग्रीको उत्पादनमै कमीकमजोरी रहेको भए त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीमा दिन मिल्दैन ।